トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Horukon mukuru-chinhu-ona kuburikidza nenzira yokumisa
In Horukon kubatwa, zvinonzi kunge yakaiswa nokupesana. Nepachinko chitoro, kana Uchikome kuti okutengesa chipfuro kuna Horukon, uye vakasununguka ngaaverenge rutapudzo zvazvingava, iwe vanonzi kudzora payout.
The payout kudzora ari dzikarongwa kubva vana zvishanu zvimwe zvinhu kumira, Kana iwe uve nguva yakatarwa, uri akati kuva hurongwa kuti allocates ari jackpot. Uyewo, boka pakutsvaga Horukon, apo akadzika pasi jackpot, ROM kuti matauriro chave achida simba kumira.
mataurire vakasununguka nechigadziko kana ROM atsamwa tafura kumira yave kuti pane kashoma kuti kusarudzwa. In
, vaya vanoziva nomusoro Horukon kubatwa ndiko, kworudzii maitiro taizoda kutarisa zvinhu kuti vakapinda yakakwirira-yakatarwa apo ini akasimuka. To
kukwirira akagara panguva, kazhinji pfungwa sezvo kutanga kuonekwa pedyo petafura jackpot ndechokuti pane kutanga akadai bhora ruchiyerera napakati bhodhi iri vakanwa kupinda kutanga. Ball kuti akadzingwa kune chakaipa chinogumbura, vachaedza Ochiyo pazasi pachinhu kukwezvana.
yarova chipikiri panguva iyoyo, kana kuwira pasi bouncing panguva dzakasiyana, iwe kana akapinda pakutanga. Vari muzvikwata zvisina tsarukano kwave akati ichi Horukon kubatwa, zvava zvinhu dzinounzwa mune transformer chokuita. Apo
Horukon kuona boka iri jackpot, kuti rinobva simba mabasa, zvinoita inofunga kuti pane pfungwa kuti bhora kwaswedera. Zvino, Toka anova zvakaoma kuderedza bhora, imi nayo vanomutswa, akadai bhora kupinda kuburikidza-inopfuura zvakanaka.
zvikonzero Fani iyi kunoitika achavawo kufanana chikonzero pamusoro apa.
uye, zvinonzi siyana mananara kunyange kana jackpot achauya tafura yako kunoitika, vakawanda mafungiro pakati pavo, mune imwe tafura muimba iyoyo boka, Super kure uye kwakanyanya Atsurichi anogara kunoitika, ndiko kutanga kunoitika kuti vakatsauka. To
kukwirira akagara panguva, pa guru Ri Pazvinoitika, zvinonzi zvinogona subtracted paminiti avhareji 9 pazviteshi Chang, mupristi yakatarwa panguva, panewo dzidziso kuti mukana iyoyo boka iri kuhwina jackpot kutsunga zvakakwirira.
Uyezve, kana rinotevera boka Mutongo kwaitwa, asi vamwe vanhu vakauya pamusoro bhora kutanga kuipa.
uye yakakwirira ezvinhu panguva rotari jackpot kwave akati kuva kakawanda nzvimbo, iwe rotari of 4 nguva paawa zvinofanira kuitwa.
kana kupfuura, ndiko kutanga kuti kumbowanikwa magetsi Horukon kukwirira akagara panguva.
Nenzira iyi, takaedza yokusuma kwese kutanga kuti yave akati kazhinji kuti rwaizoitika.
For Horukon kubatwa nzira uye maitiro, zvakakosha kuti munotenda nderipi nokuti zvokufungidzira. Pashure paizvozvo, pane chete kuisira chiitiko ukoshi uchidzidzira.